Madagasikara : Fitaterana an-dalamby – Mandray tanora hiasa ny orinasa Madarail | ONG Lalana Blog
Madagasikara : Fitaterana an-dalamby – Mandray tanora hiasa ny orinasa Madarail
Asa manana ny maha izy azy. Ny 60%-n’ny mpiasa ao amin’ny Madarail, misahana ny asa fitaterana an-dalamby, dia efa zokiolona hisotro ronono avokoa. Misy noho izany ny tetikasan’ity orinasa ity handraisana tanora ho amin’izany sehatrasa izany.
Isan’ny tanjon’ny varavarana misokatra karakarainy etsy amin’ny foiben-toerany eo amin’ny Gara Soarano, nanomboka ny alatsinainy teo ka hitohy hatramin’ny zoma ho avy izao ny handrisihana ireo tanora hanao ity asa ity.
Samy horaisina avokoa na ireo tanora efa manana traikefa, na ireo vao nivoaka nahavita fianarana. «Mbola ireo mpianatra manodidina ny 1 500 isa eo, avy amina sekoly teknika eto an-drenivohitra aloha no nahazo fanasana hanatrika izany amin’ity voalohany ity, fa hoezahina ny hanitatra ny fampahafantarana ho an’ny besinimaro amin’ny fotoana manaraka», hoy Rajaona Jocelyne, sekretera jeneralin’ny Madarail.
Miisa 17 ireo lohamasinina miasa ao amin’ny Madarail amin’izao fotoana. Ny fitaterana entana no tena mitana ny ampahany betsaka amin’ireo asa iandraiketany. Ankoatra ny fitaterana manokana ho an’ny mpizaha tany, dia misy ihany koa anefa ny fitaterana olona, iarahany amin’ny faritra Atsinanana, mampitohy an’i Moramanga Ambatondrazaka sy Moramanga Toamasina, ho fitsinjovana ireo tantsaha monina amina toerana saro-dalana amin’iny faritra iny.